Ebola: Vashandi Vanotyaira Ndege Vanobatsira Vashandi veWiricheya Havapfekedze Gloves
Posted on October 13, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Kune zvikonzero zvakawanda zvekusavhunduka nezve Ebola. Nyanzvi dzezvekurapa dzakazivisa mukana wekuputika kwakawanda muUS hauna basa, kazhinji yakawedzeredzwa zvakanyanya nevezvematongerwo enyika uye vezvenhau sensationalism.
Asi kana iwe ukashanda pane imwe yenhandare dzenyika dzakawanda dzakapihwa mhosva yekuitisa hurumende 's nyowani Ebola yekuongorora chirongwa, nepo iwe ungasave uine chikonzero chekuvhunduka, iwe une chikonzero chekutsamwa. Vazhinji vashandi vemubhadharo wepasi-pasi webasa rekuratidzira vari kuratidzira izvo zvavanoona sechimbichimbi chisinga fananidzwe chekuvandudza kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwehutano.
The New Komiti yeYork Yekuchengetedza Basa uye Hutano (NYCOSH) munguva pfupi yadarika yakaongorora vashandi vepaKennedy neLaGuardia nhandare uye vakaona kuti vashandi vanogara vachionekwa nemishonga ine chepfu, kushanda zvisina ngozi mamiriro, uye haina kukwana zvekudzivirira uye kudzidziswa. Ndege yendege uye macabiners ekuchenesa, pamwe ne wiricheya vashandi vanobatsira vafambi nehurema, kazhinji zvinosangana nekusangana nemvura yemumuviri uye marara uye zvinogumbura zvemakemikari, pasina dziviriro yakakwana yekuchengetedza kana kudzidziswa.
Mukupindura kunetseka kweEbola, Delta yekuchenesa contractor Air Serv ane yakaburitsa chirevo ichitsvaga yakanga yagadzirisa zvidziviriro zvehunjodzi zvine chekuita neEbola svondo rapfuura, uye kuti "Isu tinoramba tichiongorora marongero edu nemaitiro ekuvandudza uye kusimudzira, nekutaurirana patsva kuvashandi, pazvinenge zvichidikanwa."
Asi neChitatu chapfuura, vashandi veAir Serv mazana maviri vakataura zvido zvavo nekubva pabasa vachiratidzira. Kunyangwe La Guardia, iyo inobata ndege zhinji dzekumba, isina kuona kukanganisa kukuru mukushandira, vashandi nevamiriri veSEIU 200BJ vakabata kutya ebola semukana wekuzivisa nezve njodzi dzezuva nezuva dzebasa dzavanotarisana nadzo. Vanoshanda panhandare yendege yevamwe vashandi zviuru gumi nezviviri mudunhu reNew York kazhinji vanowana mibairo yakaderera pasi pemakambani akasiyana siyana emakondirakiti, pasina mumiriri wemubatanidzwa. Vazhinji vava kurwira kuronga neSEIU.
“Tinofanira kubata nemarutsi; tinowana zvinhu zvisina kukwana kushanda segurovhosi dzinotyoka; tinosangana nemakemikari akasimba nemarara zvinogona kukuvadza, ” akadaro Air Serv Cabin Cleaner Antonia Alvarado mune chirevo. “Sevashandi tinokodzera kurapwa zviri nani uye unhu yehupenyu. "
kunyange zvazvo vafambi hazviwanzo kuva panjodzi yekusangana nehutachiona hunokonzerwa neropa panguva yekubhururuka, NYCOSH yakawanikwa kuti “Hapana chimwe che wiricheya vashandi avo NYCOSH vakabvunzurudzwa yaive akapiwa nemagurovhosi anoraswa newaunoshandira, kunyangwe aripo kunodiwa kune panyama bata vatakuri uye dzimwe nguva kusangana neropa kana zvimwe zvinwiwa zvinogona kutapukira mumuviri. ”
Vamwe vanochenesa terminal uye vashandi vemawiricheya vanoshanda vakati vanga vasina kudzidziswa kubata uku kubuda, uko kunogona kusanganisira njodzi yeEbola, hepatitis B uye hutachiona hweHIV.
One kuongororwa wiricheya murindiri akatsanangura kukwana kudzivirirwa pakubata nevanorwara vafambi. “Vanotiudza kuti hatigone kushandisa magirovhosi [patinosundidzira iyo mavhiripu] nekuti iyo passenger ndinonzwa kunyara. Asi zvakadii noutano hwedu? ”
[btn link = "http://www.thenation.com/blog/182060/if-airport-ebola-screening-makes-you-feel-safer-you-should-now-what-workers-are-saying" chinangwa = "_ blank"] Verenga Chinyorwa Chakazara [/ btn]
Smart Wiricheya: Yekutanga Yese Internet Yakagadzirira Wiricheya